WhatsApp for Mac dia hamela anao hampiato sy hanohy ny firaketana feo | avy amin'ny mac aho
Ho an'ny mpampiasa maro (anisan'izany ny tenako), dia ny fandraisam-peo ratsy noho ny noforonina. Tsy mila mandany fotoana aho amin'ny fihainoana hafatra an-peo mandritra ny minitra maromaro izay miverimberina ny zavatra mitovy, hatrany hatrany, rehefa azo lazaina amin'ny hafatra.
Na izany aza, io fampiasa io dia ampiasain'ny mpanjifa WhatsApp ary miasa ny orinasa mba hampiasa azy io bebe kokoa. Araka ny filazan'ireo lehilahy avy any WABetaInfo kinova 2.2201.2 an'ny WhatsApp Desktop ho an'ny Mac Ahitana ny fiasa mitovy amin'izany izay ho avy amin'ny iOS ihany koa.
Ny mety ho azo no resahiko atsaharo ary avereno ny fandraketana feo. Ity beta vaovao ity, fa tsy mampiseho bokotra hampitsahatra ny fandraisam-peo, dia mampiseho ny bokotra fiatoana.
Ity endri-javatra ity dia mety tsara raha mandritra ny firaketana hafatra, tsy maintsy manakana azy hieritreritra tsara momba izay tiantsika holazaina isika, hitady ny teny mety...
Rehefa nampiato ny hafatra dia manana safidy isika Alefaso raha tiantsika ilay izy, tohizo ny fandraisam-peo, alefaso na vonoy ary atombohy indray.
Fa ankoatra ny fonctionnaire dia mety ho a tena fijaliana ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mandefa hafatra mandritra ny minitra maromaro ny namany na ny fianakaviany.
Mikasika ny datin'ny fandefasana an'ity fampiasa vaovao ity, tsy fantatra amin'izao fotoana izao. Ity endri-javatra ity dia ao amin'ny beta amin'ny dikan-iOS ihany koa. Mandra-pivoaka ny kinova farany an'ny iOS miaraka amin'ity fampiasa ity, aza manantena ny hahita azy amin'ny dikan-ny macOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » WhatsApp for Mac dia ahafahanao miato sy manohy ny firaketana feo